नेपाल र हङकङबीच खेल होला ? | Hamro Khelkud
नेपाल र हङकङबीच खेल होला ?
सोमबार, असोज ३०, २०७४
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल र हङकङबीच आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको छैटौं चरणको खेल हुने नहुने अझै निश्चित छैन । हङकङमाआइतबार आएको सामुद्रिक आँधी (टाईफुन ८) का कारण हिजोका लागि तय खेल हुन सकेन । त्यहि खेल आजका लागि सारिएको थियो ।
टाइफुनपछि लगातार वर्षा हुँदा नेपाल र घरेलु टोलीबीचको खेल हुने नहुने अनिश्चित बनेको हो । नेपाल र हङकङबीच नेपाली समयअनुसार ६ः४५ मा सुरु हुनु पर्ने थियो । तर खेल हुने मैदान मङककमा पानी सुकि नसकेकोले हङकङ क्रिकेटले जनाएको छ । केहि समयअघि बर्षा रोकिएर बाट त्यहाँ घाम लागेको बताइएको छ ।
आज बिहान पनि बर्षा भएको थियो । मैदान निरिक्षण पछि अम्पायर खेल हुने नहुने निर्णय दिनेछन् । केहि समयअघि अम्पायरले मैदान निरिक्षण गरेको बताइएको छ । खेल भएपनि ओभर घटाएर हुने उल्लेख गरिएको छ । हङकङ र नेपालबीचको खेलको टस समेत भएको छैन । आज खेल नभएको खण्डमा दुबै टोलीले १–१ अंक पाउने छन् ।
शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोलिसँग ८३ रनले पराजित भएको थियो । हारसँगै नेपालको विश्वकप छनोटमा पुग्ने सम्भावना कमजोर भएको छ । अर्को वर्ष हुने विश्व कप छनोटमा पुग्नका लागि हङकङसँगको खेल महत्वपूर्ण थियो । छनोटमा पुग्नका लागि अंक तालिकाको शीर्ष ४ मा पर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब बाँकी तीन खेलमा नेपालले आफुले जितेर मात्र पुग्ने छैन अन्य खेलमा पनि आफु अनुकुलको नजिता निस्कनु पर्ने हुन्छ । च्याम्पियनसिपको अन्तिम तथा सातौं चरणमा नेपालले युएईसँग डिसेम्बरमा उसैको मैदानमा खेल्दैछ ।
च्याम्पियनसिपमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ भने हङकङ नेपाल भन्दा दुई स्थान माथि चौथो स्थानमा उक्लेको छ । नेपालको १० खेलबाट ४ खेलमा जित र ७ खेलमा पराजित हुँदै ८ अंक छ । हङकङको १० खेलबाट १३ अंक छ । तालिकाको शीर्ष स्थानमा नेदरल्याण्ड र दोस्रो स्थानमा पपुवा न्युगिनी छन् । स्कटल्यान्ड तेस्रो र केन्या चौथो स्थानमा छ ।